लसुन खाँदा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुँदैन त ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
लसुन खाँदा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुँदैन त ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २७ फाल्गुन मंगलवार १२:४८
कोरोनाभाइरस विश्वभरि फैलिरहेको छ। तर त्यो निर्मूल पार्ने उपचार अझै पत्ता लागेको छैन। दुर्भाग्यवश स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुपयोगी सल्लाहको चक्र रोकिएको छैन। मानिसहरूले चर्चा गरेका केही कुरा तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक छन् भने कुनै घातक पनि छन्।
इटलीमा सामाजिक सञ्जालमा घरमै स्यानिटाईजर जेल बनाउने विधिबारे चर्चा गरिएको छ। तर त्यस्ता विधिबाट बनाइने जेल छालामा प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने वैज्ञानिकहरूले औँल्याएका छन्।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चाँदीमिश्रित पदार्थ सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्ता प्रभावमा मिर्गौला बिग्रिने, छारेरोग लाग्ने र छाला नीलो हुने एक प्रकारको रोग छन्। उनीहरूका अनुसार फलाम वा जिङ्कजस्तो धातु नभएकाले चाँदीको मानिसको शरीरमा कुनै उपयोगिता छैन।
त्यो सन्देश अरबी भाषामा हजारौँ पटक शेअर भएको छ। तर प्राध्यापक ब्लूमफील्डले धेरै पानी खाँदा भाइरस पखाल्न सहयोग पुग्ने प्रमाण नभएको बताइन्।
विभिन्न देशका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले शेअर गरेका सन्देशमा यूनिसेफलाई अनुचित रूपमा उद्धृत गरिएको छ। तिनमा तातो पानी सेवन गर्ने र घाममा बस्ने गर्नाले भाइरस मर्छन् भन्ने दाबी गरिएको छ तथा आईसक्रीम नखान सुझाव दिइएको छ।